09.02.21 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– तिमी अहिले अमरलोक स्थापना गर्न निमित्त बनेका छौ , जहाँ कुनै दु:ख वा पाप हुँदैन , त्यो हो नै निर्विकारी दुनियाँ।”
ईश्वरीय परिवारको आश्चर्यजनक योजना कुनचाहिँ हो?
ईश्वरीय परिवारको योजना हो– “परिवार नियोजन गर्नु”। एक सत्य धर्मको स्थापना गरेर अनेक धर्मको विनाश गर्नु। मनुष्यले जन्म नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ– उनको योजनाले काम गर्न सक्दैन। मैले नै नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्छु, बाँकी सबै आत्माहरू माथि घरमा जान्छन्। धेरै कम आत्माहरू मात्रै रहन्छन्।
यो घर पनि हो, विश्व विद्यालय पनि हो र संस्थान पनि हो। तिमी बच्चाहरूको आत्माले जान्दछ– उहाँ शिवबाबा हुनुहुन्छ। आत्माहरू हुन् शालिग्राम, जसको यो शरीर छ। शरीरले भन्दैन मेरो आत्मा। आत्माले भन्छ मेरो शरीर। आत्मा छ अविनाशी, शरीर छ विनाशी। अहिले तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झन्छौ। हाम्रो बाबा शिव हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ परम पिता। आत्माले जान्दछ– उहाँ हाम्रा परमपिता पनि हुनुहुन्छ। सुप्रीम टिचर पनि हुनुहुन्छ, सुप्रीम गुरु पनि हुनुहुन्छ। भक्तिमार्गमा पनि बोलाउँछन्– ओ गड फादर। मर्ने समयमा पनि भन्छन्– हे भगवान, हे ईश्वर। पुकार्छन् नि। तर कसैको बुद्धिमा यथार्थ रूपले बस्दैन। फादर त सबै आत्माहरूका एक हुनुहुन्छ, फेरि भनिन्छ– हे पतित-पावन। त्यसैले गुरु पनि हुनु भयो। भन्छन्– दु:खबाट हामीलाई मुक्त गरेर शान्तिधाममा लिएर जानुहोस्। त्यसैले बाबा पनि हुनु भयो, पतित-पावन सद्गुरु पनि हुनु भयो, फेरि सृष्टि-चक्र कसरी घुम्छ, मनुष्यले ८४ जन्म कसरी लिन्छन्, उहाँले बेहदको इतिहास-भूगोल सुनाउनु हुन्छ त्यसैले परम शिक्षक पनि हुनु भयो। अज्ञानकालमा बाबा बेग्लै, टिचर बेग्लै, गुरु बेग्लै हुन्छन्। तर बेहदका बाबा, टिचर, गुरु एउटै हुनुहुन्छ। कति फरक भयो। बेहदका बाबाले बेहदको वर्सा दिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई। उनीहरूले त हदको वर्सा दिन्छन्। पढाइ पनि हदको हो। विश्वको इतिहास-भूगोल त कसैले पनि जानेका छैनन्। यो कसैलाई पनि थाहा छैन– लक्ष्मी-नारायणले राज्य कसरी पाए? कति समय त्यो राज्य चल्यो? फेरि त्रेताका राम-सीताले कति समय राज्य गरे? केही पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– बेहदका बाबा आउनु भएको छ, हामीलाई पढाउन। फेरि बाबाले सद्गतिको मार्ग बताउनु हुन्छ। ८४ जन्म लिंदै लिंदै तिमी पतित बन्छौ। अब पावन बन्नु छ। यो हो तमोप्रधान दुनियाँ। सतो, रजो, तमोमा हरेक चीज आउँछ। यो जुन सृष्टि छ, त्यसको पनि अवधि छ, नयाँबाट पुरानो, पुरानोबाट नयाँ हुन्छ। यो त सबैले जानेका छन्। सत्ययुगमा देवी-देवताको राज्य थियो। भगवान-भगवतीको राज्य थियो। ठीक छ फेरि के भयो? उनीहरूले पुनर्जन्म लिए। सतोप्रधानबाट सतो, सतोबाट रजो तमोमा आए। यति-यति जन्म लिए। यहाँ ५ हजार वर्ष पहिला जब लक्ष्मी-नारायणको राज्य थियो, त्यहाँ मनुष्यको आयु औसत १२५-१५० वर्ष हुन्छ। त्यसलाई अमरलोक भनिन्छ। अकालमा मृत्यु कहिल्यै हुँदैन। यो हो मृत्युलोक। अमरलोकमा मनुष्यहरू अमर रहन्छन्, आयु लामो हुन्छ। सत्ययुगमा पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो। निर्विकारी विश्व भनिन्छ। अहिले छ विकारी दुनियाँ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– हामी शिवबाबाका सन्तान हौं। वर्सा शिवबाबाबाट मिल्छ। यी दादा, उहाँ हजुरबुवा। वर्सा हजुरबुवाको मिल्छ। हजुरबुवाको सम्पत्तिमा सबैको हक हुन्छ। ब्रह्मालाई भनिन्छ प्रजापिता। एडम र ईव, आदम बीबी। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार गड फादर। यी (प्रजापिता) भए साकारी फादर। यिनको आफ्नो शरीर छ। शिवबाबाको आफ्नो शरीर छैन। त्यसैले तिमीलाई वर्सा मिल्छ शिव बाबाबाट ब्रह्माद्वारा। हजुरबुवाको सम्पत्ति त मिल्छ नै पिताद्वारा। शिव बाबाबाट ब्रह्माद्वारा तिमी फेरि मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। मनुष्य से देवता किये करत न लागी वार.... कसले बनायो? भगवानले। महिमा गर्छन् नि ग्रन्थमा। महिमा धेरै छ। जसरी बाबा भन्नुहुन्छ– अल्फलाई याद गर्यौ भने बे बादशाही तिम्रो। गुरुनानकले पनि भन्दथे– साहेबलाई जप अनि सुख मिल्छ। उहाँ निराकार अकालमूर्त बाबाको नै महिमा गाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर्यौ भने सुख मिल्छ। अहिले बाबालाई नै याद गर्छन्। लडाईं पूरा भयो भने लक्ष्मी-नारायणको राज्यमा एउटै धर्म हुन्छ। यो बुझ्नु पर्ने कुरा हो। भगवानुवाच– पतित-पावन ज्ञानका सागर भगवानलाई भनिन्छ। उहाँ नै दु:ख-हर्ता सुख-कर्ता हुनुहुन्छ। जब हामी बाबाका बच्चा हौं भने अवश्य हामी सुखमा हुनुपर्छ। अवश्य हामी सत्ययुगमा थियौं। बाँकी सबै आत्माहरू शान्तिधाममा थिए। अहिले त सबै आत्माहरू यहाँ आइरहेका छन्। फेरि हामी गएर देवी-देवता बन्छौं। स्वर्गमा पार्ट खेल्छौं। यो पुरानो दुनियाँ हो दु:खधाम, नयाँ दुनियाँ हो सुखधाम। घर पुरानो भएपछि त्यसमा मुसा, सर्प आदि निस्किन्छन्। यो दुनियाँ पनि त्यस्तै छ। यस कल्पको आयु ५ हजार वर्ष छ। अब अन्त्य समय हो। गान्धीजीले पनि चाहन्थे– नयाँ दुनियाँ नयाँ दिल्ली होस्, रामराज्य होस्। तर यो त बाबाको नै काम हो। देवताहरूको राज्यलाई नै रामराज्य भनिन्छ। नयाँ दुनियाँमा त अवश्य लक्ष्मी-नारायणको राज्य हुन्छ। पहिला त राधा-कृष्ण दुवै बैग्ला-बेग्लै राजधानीका थिए फेरि उनीहरूको विवाह भयो अनि लक्ष्मी-नारायण बने। अवश्य यस समयमा यस्तो कर्म गरेका थिए। बाबाले बसेर तिमीलाई कर्म-अकर्म-विकर्मको गति सम्झाउनु हुन्छ। रावण राज्यमा मनुष्यले जे कर्म गर्छन्, त्यो कर्म विकर्म बन्छ। सत्ययुगमा कर्म अकर्म हुन्छ। गीतामा पनि छ तर नाम परिवर्तन गरिएको छ। यो हो भूल। कृष्ण जयन्ती त हुन्छ सत्ययुगमा। शिव हुनुहुन्छ निराकार परमपिता। कृष्ण त साकार मनुष्य हुन्। पहिला शिवजयन्ती हुन्छ फेरि कृष्ण जयन्ती भारतवर्षमा नै मनाउँछन्। शिवरात्रि भन्छन्। बाबा आएर स्वर्गको राज्य दिनुहुन्छ। शिवजयन्ती पछि हुन्छ कृष्ण जयन्ती। त्यसको बीचमा हुन्छ रक्षा-बन्धन किनकि पवित्रता हुनुपर्छ। पुरानो दुनियाँको विनाश पनि हुनुपर्छ। फेरि लडाईं लागेपछि सबै खतम हुन्छ फेरि तिमी आएर नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्छौ। तिमीले यस पुरानो दुनियाँ, मृत्युलोकको लागि पढ्दैनौ। तिम्रो पढाइ हो नयाँ दुनियाँ अमरलोकको लागि। यस्तो त कुनै कलेज छैन। अब बाबा भन्नुहुन्छ– यस मृत्युलोकको अन्त्य हुन्छ त्यसैले छिट्टै पढेर होसियार हुनु छ। उहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ, पतित-पावन पनि हुनुहुन्छ, पढाउनु पनि हुन्छ। त्यसैले यो ईश्वरीय विश्व विद्यालय पनि हो। भगवानुवाच छ नि। कृष्ण त सत्ययुगका राजकुमार हुन्। उनले पनि शिव बाबाबाट वर्सा लिन्छन्। यस समयमा सबैले भविष्यको लागि वर्सा लिइरहेका छन्। फेरि जसले जति पढ्छन् त्यति वर्सा मिल्छ। पढेनन् भने पद कम हुन्छ। जहाँ रहे पनि पढिराख। मुरली त बेलायतमा पनि जान सक्छ। बाबाले सधैं सावधानी पनि दिइरहनु हुन्छ। प्यारा बच्चाहरू! बाबालाई याद गर, यसबाट तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। आत्मामा जुन खाद परेको छ त्यो निस्केर जान्छ। आत्मा १०० प्रतिशत शुद्ध बन्छ। अहिले त अशुद्ध छ। भक्ति त मनुष्यले धेरै गर्छन्। तीर्थमा, मेलामा लाखौं मानिस जान्छन्। यो त जन्म-जन्मान्तर चल्दै आउँछ। कति मन्दिर आदि बनाउँछन्, मेहनत गर्छन् फेरि पनि सिँढी झर्दै आउँछन्। अहिले तिमीले जानेका छौ– हामी चढ्ती कलाद्वारा सुखधाममा जान्छौं, फेरि झर्नु छ। फेरि कला कम हुँदै जान्छ। १० वर्षपछि नयाँ घरको भव्यता अवश्य कम हुन्छ। तिमी नयाँ दुनियाँ सत्ययुगमा थियौ। १२५० वर्षपछि रामराज्य सुरु भयो, अहिले त बिलकुल तमोप्रधान छ। मनुष्य कति धेरै भएका छन्। दुनियाँ पुरानो भएको छ। उनीहरूले त जन्म नियन्त्रणको योजना बनाइरहन्छन्। कति अलमलमा परिरहन्छन्। हामीले लेख्छौं– यो त भगवानको नै काम हो। सत्ययुगमा गएर ९-१० लाख मनुष्य बाँकी रहन्छन्। बाँकी सबै आफ्नो घर स्वीट होममा जान्छन्। यो ईश्वरीय परिवार नियोजन हो। एक धर्मको स्थापना, बाँकी सबै धर्मको विनाश। यो त बाबाले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। उनीहरूले त भन्छन् बरू विकारमा जाऊ तर बच्चा नहोस्। यस्तो गर्दा-गर्दा केही पनि हुँदैन। यो योजना त बाबाको हातमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म नै दु:खधामबाट सुखधाम बनाउन आएको हुँ। हर ५ हजार वर्षपछि म आउँछु। कलियुगको अन्त्य र सत्ययुगको आदिमा। अहिले यो हो सङ्गम युग। यसबेला नै पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँ बन्छ। पुरानो दुनियाँको विनाश र नयाँ दुनियाँको स्थापना यो त बाबाको नै काम हो। सत्ययुगमा थियो नै एक धर्म। यी लक्ष्मी-नारायण विश्वका मालिक, महाराजा-महारानी थिए। यो पनि तिमीले जानेका छौ, यो माला कसको बनेको हो? माथि छ फूल शिवबाबा फेरि छन् युगल दाना ब्रह्मा-सरस्वती। उनीहरूको यो माला हो, जसले विश्वलाई नर्कबाट स्वर्ग, पतितबाट पावन बनाउँछन्। जसले सेवा गरेर जान्छन्, उनीहरूको नै याद रहन्छ। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– यी सत्ययुगमा पवित्र थिए। प्रवृत्ति मार्ग पवित्र थियो। अहिले त पतित छ। गायन पनि छ– पतित-पावन आऊ, आएर हामीलाई पावन बनाऊ। सत्ययुगमा यसरी कहाँ पुकार्छन् र। सुखमा कसैले पनि बाबालाई याद गर्दैनन्। दु:खमा सबैले जप गर्छन्। लिबरेटर, रहमदिल, ब्लिसफुल बाबा नै आएर सबैलाई मुक्ति-जीवनमुत्ति दिनुहुन्छ। उहाँलाई नै बोलाउँछन्, आएर स्वीट होममा लिएर जानुहोस्। अहिले सुख छैन। यो हो प्रजाको प्रजा माथिको राज्य। सत्ययुगमा त राजा, रानी, प्रजा हुन्छन्। बाबा बताउनु हुन्छ– तिमी कसरी विश्वको मालिक बन्छौ? त्यहाँ तिम्रो पासमा अथाह, अनगिन्ती धन हुन्छ। सुनको ईंटको महल बन्छ। मेशीनबाट सुनको ईंट निस्किरहन्छ। फेरि त्यसमा पनि हीरा-जुहारत जडान गर्छन्। द्वापरमा पनि कति हीरा थियो, जुन लुटेर लगे। अहिले त छैन। यो ड्रामामा निश्चित छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म हर ५ हजार वर्षपछि आउँछु। पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि यी आणविक बम आदि बनेका छन्। यो हो साइन्स। बुद्धिद्वारा यस्ता-यस्ता चीज निकालेका छन्। जसबाट आफ्नै कुलको विनाश गर्छन्। यो कुनै राख्नको लागि कहाँ बनाउँछन् र! यो रिहर्सल भइरहन्छ। जबसम्म राजधानी स्थापना भएको हुँदैन, तबसम्म लडाईं लाग्न सक्दैन। तयारी त भइरहेको छ, त्यसको साथमा प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ। यति धेरै मानिस हुँदैनन्।
अब बच्चाहरूले यस पुरानो दुनियाँलाई भुल्नुपर्छ। बाँकी स्वीट होम, स्वर्गको बादशाहीलाई याद गर्नुपर्छ। जसरी नयाँ घर बनाउँछन् भने बुद्धिमा नयाँ घर नै याद रहन्छ नि। अहिले नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। बाबा हुनुहुन्छ सर्वका सद्गतिदाता। आत्माहरू सबै जान्छन्। बाँकी शरीर यहाँ नै खतम हुन्छ। आत्मा पवित्र बन्छ, बाबाको यादबाट। पवित्र अवश्य बन्नु छ। देवताहरू पवित्र हुन्छन् नि। उनीहरूको अगाडि कहिल्यै बीँडी, तम्बाखु आदि राखिदैन, उनीहरू वैष्णव हुन्। विष्णुपुरी भनिन्छ। त्यो हो नै निर्विकारी विश्व। यो हो विकारी विश्व। अब निर्विकारी दुनियाँमा जानु छ। समय थोरै बाँकी छ। यो त स्वयं पनि सम्झन्छन्– एटोमिक बमबाट सबै खतम भएर जान्छ। लडाईं त लाग्नु नै छ। भन्छन्– हामीलाई कोही प्रेरणा गर्नेवाला छ, जसकारण हामीले बनाइरहेका छौं। जानेका छन् पनि आफ्नै कुलको विनाश भइरहेको छ। तर नबनाइकन रहन सक्दैनन्। शंकरद्वारा विनाश, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। विनाश सामुन्ने खडा छ। ज्ञान यज्ञबाट यो विनाश ज्वाला प्रज्ज्वलित भएको हो। अहिले तिमीले स्वर्गको मालिक बन्नको लागि पढिरहेका छौ। यो पुरानो दुनियाँ खतम भएर नयाँ बन्छ। यो चक्र घुमिरहन्छ। इतिहास अवश्य दोहोरिन्छ। पहिला आदि सनातन देवी-देवता धर्म थियो फेरि चन्द्रवंशी क्षत्रिय धर्म त्यसपछि इस्लामी, बौद्धि आदि आए। फेरि अवश्य पहिलो नम्बरवाला आउँछन्, बाँकी सबै विनाश हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई कसले पढाउँदै हुनुहुन्छ? उहाँ निराकार शिवबाबाले। उहाँ नै शिक्षक हुनुहुन्छ, सद्गुरु हुनुहुन्छ। आउनासाथ पढाइ सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसैले लेखिएको छ शिवजयन्ती नै गीता जयन्ती। गीता जयन्ती नै श्रीकृष्ण जयन्ती। शिवबाबाले सत्ययुगको स्थापना गर्नुहुन्छ। कृष्णपुरी सत्ययुगलाई भनिन्छ। अहिले तिमीलाई पढाउने कोही साधु, सन्त, मनुष्य होइनन्। उहाँ त दु:खहर्ता, सुखकर्ता, बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। २१ जन्मको लागि तिमीलाई वर्सा दिनुहुन्छ। विनाश त हुनु नै छ। यस समयको लागि नै भनिन्छ– किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए.... चोरी पनि धेरै हुन्छ। आगो पनि लाग्नु छ। यस यज्ञमा सबै स्वाहा हुन्छ। अहिले थोरै-थोरै आगो लाग्छ फेरि बन्द हुन्छ। अझै केही समय छ। सबै आपसमा लड्ने छन्। छुटाउनेवाला कोही पनि रहने छैन। रगतको नदी पछि फेरि दूधको नदी बग्छ। यसलाई भनिन्छ अनाहक रगतको खेल। बच्चाहरूले साक्षात्कार पनि गरेका छन्, फेरि यी आँखाले पनि देख्छौ। विनाश भन्दा पहिला बाबालाई याद गर्नु छ, तब तमोप्रधान आत्मा सतोप्रधान बन्छ। बाबाले नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि तिमीलाई तयार गरिरहनु भएको छ। राजधानी पूरा स्थापना भएपछि विनाश हुन्छ। अच्छा!
१) विष्णुपुरीमा जानको लागि स्वयंलाई लायक बनाउनु छ। सम्पूर्ण पावन बन्नु छ, अशुद्ध खान-पान त्याग गर्नु छ। विनाश भन्दा पहिला आफ्नो सबैथोक सफल गर्नु छ।
२) छिटो-छिटो पढेर होसियार हुनु छ। कुनै पनि विकर्म नहोस्, यसको ध्यान राख्नु छ।
त्याग र तपस्याद्वारा सेवामा सफलता प्राप्त गर्ने सच्चा सेवाधारी भव
सेवामा सफलताको मुख्य आधार हो– त्याग र तपस्या। त्याग अर्थात् मनसा संकल्पबाट पनि त्याग, कुनै परिस्थितिको कारण, मर्यादाको कारण, मजबुरीबाट त्याग गर्नु– यो त्याग होइन। ज्ञान स्वरूपबाट, संकल्पबाट पनि त्यागी बन र तपस्वी अर्थात् सदा बाबाको लगनमा लवलीन, प्रेम, आनन्द, सुख, शान्तिको सागरमा डुब्नु। यस्ता त्यागी, तपस्वी नै सेवामा सफलता प्राप्त गर्ने सच्चा सेवाधारी हुन्।
आफ्नो तपस्याद्वारा शान्तिको प्रकम्पन फैलाउनु नै विश्व सेवाधारी बन्नु हो।